Wake up oromo from your sweet dream! Neftenga is taking over Oromia in the name of religion Kichuu
[ October 16, 2019 ] Qondaalonni Naannoo Amaaraa kan warra Gumuz fixan, kan Qimaant sanyii duguugan,	News
HomeAfaan OromooNewsWake up oromo from your sweet dream! Neftenga is taking over Oromia in the name of religion
Wake up Oromo from your sweet dream! Neftenga is taking over Oromia in the name of religion!
Amaarii OPDO dacheetti galchuuf lafa itti kate jirti! Kolonel Abiyileen ganda kessaa Oromoon Hammatadha ja’e ajanda shiyxaana lalabaa jira.
Namichii dabaloos guddadha.
ABOtu Baankii saame jedhame Soba ta’e
ABOtu Abboota Gadaa iggite jedhame Soba ta’e
Ammaas ABOtu Burraayyuutti Boombii dhoose jedhame suniis soba ta’e